Plex DVR dia nampiakatra ny vokatra Apple TV amin'ny fahefatra ambin'ny folo | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo zavatra nentin'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra dia rafitra vaovao antsoina TVOS izay namela, sambany, izahay afaka nisintona fampiharana avy amin'ny magazay fampiharana an'i Apple ho an'ny Apple TV. Amin'izany fomba izany, ny fahafaha-nanolotra ny fampandehanana an'io vokatra mahavariana io dia tafakatra hatrany amin'ny hery fahefatra ary izany dia noho izany ireo mpandraharaha tsy miankina ary tsy ny Apple irery ihany no afaka mamorona rindranasa amin'ny Apple TV.
Iray amin'ireo fangatahana kintana ho an'ny Apple TV ny fampiharana PLEX, fampiharana iray ahafahan'ny playback video ho manankarena kokoa sy hiditra mpizara eo an-toerana afaka mahita atiny nefa tsy mila manana izany ao anatin'ny Apple TV.
Nandritra ny taona maro dia nivoatra ny fampiharana PLEX mandra-pahatongany amin'ny ananantsika ankehitriny ary izany dia navaozina ho PLEX DVR, izany hoe, sambany izy io no mamela ireo programa TV ho voarakitra ao amin'ny Apple TV. Mba hahafahana mankafy ireo fiasa ireo dia tsy maintsy manana tuner mifanentana ianao ary raha sanatria izany misy tuner USB manana solosaina na NAS izay manao ny asa fanodinana rehetra.
Ity fanavaozana farany ity dia midika fa afaka mamela antsika ny fampiharana PLEX ho an'ny tvOS mijery fahitalavitra mivantana, manao fanovana fotoana camin'ny Apple TV na firaketana fandaharana, hetsika izay mahatonga ny Apple TV matanjaka kokoa. Ankehitriny, izany glitter rehetra izany dia tsy volamena ary fantatry ny mpamorona ny PLEX fa ity dia endri-javatra izay hahasarika olona an-tapitrisany ka tsy maintsy manana famandrihana amin'ny Plex Pass ianao ankoatry ny tuner mifanentana sy mpizara Plex. aza mieritreritra fa amin'ny fanavaozana ny fampiharana fotsiny dia ho afaka mankafy ny zavatra rehetra nolazainay taminao ianao.
Raha te hahalala bebe kokoa momba izay nohazavainay tamin'ity lahatsoratra ity ianao dia afaka mitsidika ny rohy manaraka Ary koa, raha hijery ireo toner mifanentana dia afaka mahita ny tranonkala manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny Plex DVR dia nampiakatra ny famokarana Apple TV hatrany amin'ny ambaratonga faha-n